Cara mula-mula pasang Zoom Aplikasi
Kana iwe uchishanda uchibva kumba, iwe ungangodaro wakanzwa nezveZoom, imwe yekutungamira vhidhiyo kusangana software software pamusika.
Iko inokubvumidza iwe kuti ugone kupindirana nevashandi pamwe nevashandi kana vashandi pamisangano yemunhu haigoneke. Izvi zvinoita kuti kutaura nefoni kuratidzike kuve kwevanhu, sezvo kunokubatsira kuti unzwe wakabatana NeCCID-19 coronavirus inokuvadza inotenderera pasi rese, semuenzaniso, Zoom rave chinhu chakakosha pashoma-, pakati-, uye hukuru-hukuru zvikwata zvinoda kuramba zvichikurukurirana uye kuenderera mberi kwebasa ravo remazuva ese nekukanganiswa kushoma.
Kana vanhu vachitaura nezve Zoom, iwe unowanzo kunzwa mazwi anotevera: Zoom Musangano uye Zoom Kamuri. Musangano weZoom unoreva musangano wevhidhiyo musangano uyo wakaitirwa uchishandisa Zoom. Unogona kubatana nemisangano iyi kuburikidza newebhu webhusaiti kana foni. Zvichakadaro, Zoom Kamuri ndiyo yemukati Hardware setup iyo inoita kuti makambani kuronga uye kutanga Zoom Misangano kubva kumakamuri avo emusangano.
Nekure Pro: Iyi tier inodhura $ 14.99 pamwedzi uye pagungano remusangano. Iyo inobvumira magedhi kugadzira yega ID emisangano yekudzokorora Zoom Misangano, uye inobvumidza kurekodha musangano mumafu kana chishandiso chako, asi inobvisa nguva yeboka musangano musangano maawa makumi maviri nemana.
Zoom Bhizinesi: Iyi tier inodhura $ 19.99 pamwedzi uye pamisangano yega yegumi (gumi pasi). Iyo inokutendera kuti uite brand Zoom misangano nezvisina basa URLs uye yekambani kushambadzira, uye inopa zvinyorwa zve Zoom musangano zvakanyorwa mugore, pamwe nekuzvipira kwevatengi.
ZoomEnterprise: Iyi tier inodhura $ 19.99 pamwedzi uye pamisangano yeanosangana (zana shoma) uye inoitirwa mabhizinesi ane vashandi vane chiuru. Iyo inopa isina muganho wegore rekurekodha, maneja wekubudirira kwevatengi, uye zvidzikiso pawebhusaiti uye Zoom Rooms.
Inesarudzo - Room Rooms: Kana iwe uchida kumisikidza Zoom Rooms, iwe unogona kusaina kusaina kwemazuva makumi matatu kuyedzwa, mushure mezvo Zoom Rooms inoda imwe $ 30 pamwedzi uye kamuri kunyoreswa, nepo webinars ichishandisa Zoom inodhura madhora makumi mana pamwedzi nemubati.
Dhawunirodha Zoom app ye desktop kana nhare
Iyo desktop desktop inowanikwa Windows uye macOS, nepo nharembozha ichiwanikwa yeApple neIOS
Mapurogiramu ese anorega ujoinise musangano usina kusaina, asi zvakare ita kuti utore uchishandisa Zoom account, Google, Facebook, kana SSO. Kubva ipapo, unogona kutanga musangano, kubatana musangano, kugovera skrini yako muZoom Kamuri nekupinda ID ID, tanga Zoom Misangano, simudza / simudza mic yako, tanga / mira vhidhiyo, koka vamwe kumusangano, shandura yako Screen zita, ita-musangano musangano, uye tanga kurekodha gore.
Rekodha mafoni sevhidhiyo
Zoom inoita kuti iwe ugone kurekodha mafoni semavhidhiyo. Iwe unofanirwa kusarudza kuti ushandise emunharaunda kana Cloud sarudzo.
Kana iwe usingaone iyo sarudzo yekurekodha, tarisa zvigadziriso zvako muwebhu app (pasi peMisangano Yangu Yemisangano) kana ita kuti account yako admin iigone. Mafaira ekurekodha anogona kuodha kukombuta kana kuturikwa kubva kubhurawuza. Kuti utonge ako emisangano yakarekodwa kana kugovana rekodhi nevamwe, pinda muakaunti yako uye ufambe kuenda kune Zvangu Zvakarekodhwa peji.
Virtual kumashure kwedesktop uye mobile
Iwe unogona kurongedza mufananidzo wechinhu chero chaunoda kugadzirisa kumashure kwako. Inowanikwa kune ese iPhone nematafura
PaMac kana PC, semuenzaniso, ingovhura yako Zoom mutengi, tinya pane "Setup" icon pakona, uye sarudza "Virtual Background" mune menyu mativi. Zoom inopa mashoma mashoma kumashure. Dzvanya pane iyo iwe yaunoda kushandisa. Kana iwe uchida yako yeyako kumashure, tinya pane yekuwedzera chiratidzo kumusoro uye kuruboshwe kwemasampule emashure, sarudza mufananidzo kubva pakombuta yako, uye wobva wawedzera.
Shandisa firita kuti subtly yakatsetseka mitsara yakanaka. Zvinorehwa zvinotaridzika chaizvo zvakasikwa. Enda kuZvigadziriso, uye pasi peiyo Vhidhiyo tebhu, tarisa bhokisi rinotevera Kubata kumusoro.
Unogona zvinyorese ruzha rwemusangano unorekodha kune gore. Uye, semubati musangano, unogona kugadzirisa zvinyorwa zvako, wongorora zvinyorwa zvemashoko akakosha kuti uwane vhidhiyo panguva iyoyo, uye ugovane rekodhi.
Kugovera Screen uye kushandisa pause share
Wakanga uchiziva here kuti iwe haugone kungogovanisa skrini yako (smartphone uye desktop) uye kunyange kumbomira yako yekugovera skrini? Ingo pfuuridzira imbomira Kugovana paunenge usingade kuti vatori vechikamu vemisangano vakuone iwe uchitenderera pane yako mharidzo. Dzidza zvakawanda pano.